Umhlahlandlela we-Video Poker yase Ningizimu Africa ka 2021
Ikhaya / Imihlahlandlela / umhlahlandlela we-video poker
Umhlahlandlela we-Video Poker
I-Video Poker ngokungangabazeki iyindlela endala kunazo zonke ye-video slot, ngoba imishini yokuqala eyi-slot (eyasungulwa ngawo-1890s) yayimayelana noku spina isandla se-poker. Kodwa-ke, i-video poker yanamuhla ayibandakanyi ukuspina: konke kumayelana nokubona okungaba khona, njenge-poker yangempela.
Ku-video poker, umdlalo usebenza ngokufana ne-Stud Poker ejwayelekile, ngendlela efanayo naleyo obuzodlala ngayo ne-dealer noma nabanye abantu. Ngaphandle kwe-video poker, ayikho i-angle yokuncintisana. Uma wenza noma yisiphi isandla se-poker, uzowina. Inani lemali onqobayo lisuselwa kunamandla esandla ophumelele ukusenza.
Idlalwa kanjani i-Video Poker eku-Inthanethi
Umdlalo we-video poker uqala ngokwenza ukubheja. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba usayizi webhodo owunqobayo uma inhlanhla isecaleni lakho ilingana ngqo nosayizi woku bheja kwakho kokuqala. Awutholi ukwandisa ukubheja kwakho ngemuva komdlalo – ukuvulwa koku bheja yilona thuba ozilithola. Ngomqondo othile, kufana nokuba yi-Big Blind unomphela.
Lapho ukubheja kwakho sekufakiwe, umshini uzokuphathisa amakhadi amahlanu. Abheke kahle isikhathi eside – asikho isikhathi esinqunyelwe ukwenza okuthile, futhi impumelelo kulo mdlalo ivela ngokwazi ukubona okungaba yisandla esikhulu.
Uma ungajwayelene nezandla ze-poker, yilezi: Okubili(pair), ngababili (Two pairs), nabathathu bohlobo oluthile. Okulandelayo okunamandla kakhulu yi-Straight, okungamakhadi awu-5 wanoma iyiphi isudi ngokulandelana okukhulayo.
Ngemuva kwalokho kuza i-Flush, okungamakhadi awu-5 wesudi efanayo. Ngokulandelayo kuza i-Full House, okuyizinhlobo ezintathu nezinhlobo zombili ndawonye esandleni esisodwa. Lokhu kulandelwa yiZine zohlobo oluthile.
Izandla ezimbili zokugcina ezinamandla kakhulu yiStraight Flush – amakhadi amahlanu esudi efanayo ekukhuphukeni ngokulandelana kwamanani – kanye neRoyal Flush, eyiStraight Flush equkethe i-10 nge-Ace yanoma iyiphi isudi.
Ngakho-ke, uma ubheka amakhadi akho amahlanu okuqala, kuzodingeka ucabange ukuthi lokhu kungashonaphi. Uma ubona ukwenziwa kwesandla esifanelekile, udinga ukunamathela kumakhadi angakwenzela wona.
Uchofoza amakhadi ofuna ukuwagcina – ungawagcina wonke noma ungawagcini, konke kukuwe ngokuphelele. Kepha uma usuzinikele emzuliswaneni wesibili, awukwazi ukuguqula umqondo wakho. Noma imaphi amakhadi ongazange uchofoze ukuwagcina azolahlwa, futhi azothathelwa indawo amasha. Lesi yisandla sakho sokugcina manje. Uma kukhona isandla se-poker esisebenzisekayo kuso, uzokhokhelwa ukuthi yini ekufanele ngokubheka ukubheja kwakho kokuvula.
Amathiphu wokudlala ikhasino ye-Video Poker eku-Inthanethi
Konke kumayelana nokwazi ukuthi kungaba yini, nokuzibeka engcupheni ngesikhathi esifanele. Isibonelo, ake sithi unama-aces, kepha futhi nama spades amane esandleni sakho sokuvula. Noma ama-aces angumnqobi, kungcono kakhulu ukukulahla eyodwa ngethemba lokwenza ukukhokha okuphezulu.